FANJAKANA TAN-DALANA : Mizotra mankaiza ny fametrahana fanjakana tan-dalàna? | Canalnews Madagascar
Home EDITORIAL FANJAKANA TAN-DALANA : Mizotra mankaiza ny fametrahana fanjakana tan-dalàna?
FANJAKANA TAN-DALANA : Mizotra mankaiza ny fametrahana fanjakana tan-dalàna?
By Nirinamar 20, 2015, 07:27 0
Nambara foana hatramin’izay ny hoe hametraka fanjakana tan-dalàna isika. Miroso mankany amin’izany tokoa ve ny firenena. Toa mampihiratra ny mason’ny jamba ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Ireo noheverina fa nanao izany mihitsy no nanitsakitsaka ny lalàna velona, ka rehefa misy ny fifandirana dia samy manao dika mitovy ho fanamarinana izany izy ireo na dia niaraha-nanapaka aza izany. Ny mpitandro filaminana izay nandrandraina fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany aza manao ny ataony ka lasa papango mifaoka ny akoho araka ny fitenenana, izany ve no tan-dalàna. Vao tsy ela akory izay, vaky ny ady teo anivon’izy ireo sy ny fitsarana, tafavoaka foana ireo olon-dratsy rehefa tonga eny, tan-dalàna ve isika? Fitsarana marina sy tsy mitongilana no tadiavina, hoy ny filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA omaly tamin’ny fanokafana ny fotoam-pitsarana teny Anosy. Nanaiky ny tenany fa misy ny lesoka amin’izay tsy fanarahan-dalàna izay. Tsy ampy ny fahatokisan’ny vahoaka ny fanjakana ka izany no mahatonga ny fitsaram-bahoaka mirongatra. Iza izany no andrasana sy ho atao fitaratra amin’izay tranga mamohehitra izay? Ny mpitondra izay efa nanao velirano imasom-bahoaka tamin’ny fianianany teny Mahamasina, fa hanaja ny lalàm-panorenana toy ny anakandriamaso, tena izay ve no hita ankehitriny sa ny mpanao lalàna izay mandika vilana ny efa voasoratra sa ny vahoaka madinika izay mizaka ny tsy eran’ny aina rehefa misy tsy mety atao, fa ireo olona ambony toa tsy voahitikitika mihitsy. Ho mizàna tsy mitongilana tokoa ve ny fitsarana izay najoro. Anjaran’ny tsirairay ny mandinika sy mamakafaka ny zava-misy amin’izao. Manginy fotsiny ny tsy fanajana ny zon’olombelona amin’ny lafiny maro ka mahatonga ny mpamatsy vola mitazam-potsiny noho izay tsy fanarahan-dalàna izay. Mankaiza izany izao ny lalana mankany amin’ny fanjakana tan-dalàna?
Previous PostKSMD: Ilain’ny solombavambahoaka ny fiara 4x4, tokony hamidy ny andramena hanampiana ny tra-boina. Next PostDEPUTE ROBERTO TINOKA: Fanesorana ny DGT, hampihemotra ny famatsiam-bola eto Madagasikara.